China dị iche iche na premade haịdrọlik oyiyi akwa sooks Manufacture na Factory | Topa
ụdị dị iche iche premade haịdrọlik oyiyi akwa sooks
Nodị No.: 22611RW 19243
Eriri Type: Eriri Esịtidem
Nha: DN 6MM Iji 50MM
N'elu Ọgwụgwọ: Zinc agbatị
Akụrụngwa: Carbon Nchara
Njikọ: Nwanyi Ma obu Nwoke
Udi: Nhata ma ọ bụ Elbow
Ọkọlọtọ: Otu Ibe sooks Dabara Adaba
Aha: Tydị dị iche iche Emepụtara Hydraulic Fittings Hose
Ebe Mmalite: Heibei, China
Tụkwasịnụ Ikike: 500000 PC kwa ọnwa
Akwụkwọ: Hydraulic Fittings ISO
iche iche premade Ngwunye Hydraulic sooks
Eriri ọkọlọtọ nke akwa hydraulic: BSPP, BSPT, NPT, METRIC wdg. Anyị Sooks Fittingsbu ndi mba ozo kariri iri ato n’uwa n’iile. Anyị nwere ọkachamara QC test ka ịlele ngwaahịaHydraulic sooks akwa akwa akwa mma dị ka ndị ahịa dị iche iche.
Nke anyi Njikọ sooks ngwaahịa gụnyere ọkọlọtọ dịgasị iche iche: Eaton ọkọlọtọ, ọkọlọtọ Parker, ọkọlọtọ ndị America, omenala, na ima elu nke akwa akwa sitere na 1/8 ″ ruo 2 ″ na na. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị edozi ọ bụla ma ọ bụ ọdịdị dị mma ma ọ kwesịrị ekwesị, ọkpọkọ kwesịrị ekwesị, ma ọ bụ ihe kwesịrị ekwesịNkwụnye enwere ike ịhazi ya na NPT, JIC, ORFS, BSP, BSPT, BSPP, ma ọ bụ ụdị SAE na ihe niile nwere ike iru REACH na RoHS na-ekwenye na ọgwụgwọ ala.
AHOSE AKW .KWỌ
T THR T T
G1 / 8 ″ X28
G1 / 4 ″ X19
G3 / 8 ″ X19
G1 / 2 ″ X14
G5 / 8 ″ X14
G3 / 4 ″ X14
G1 ″ X11
G1.1 / 4 ″ X11
G1.1 / 2 ″ X11
G2 ″ X11
N'ịbụ onye na-eme ka ndị ahịa na-azụ ahịa ahịa, anyị na-etinye aka na ịnye ọtụtụ agwa akwa hydraulic hose. Achọpụta nke ngwaọrụ anyị na-abawanye kwa ụbọchị n'ihi ọrụ ya na arụmọrụ arụmọrụ ya. A nabatara ngwaọrụ anyị maka arụmọrụ ha na fechaa na arụmọrụ.
1.Anyị Adapị Hydraulic nwere eriri okpu, nwere ike ichebe ngwongwo ahụ, hụ na ị nwere ike ịnabata ngwongwo niile
2.Onye ọ bụla Dabara Adaba Na nkwụnye a ga-ekpuchi ya na mkpuchi plastik.
3.Then ngwugwu site katọn.
4.48-52 obere katọn nke Nkwụnye sooks nọ na pallet osisi.
1.N'ihi nlele ahụ, anyị chọrọ ụbọchị ọrụ 3 iji kwadebe, nnyefe site na nkwupụta.
2.N'ihi nnukwu iwu, Ohaneze ọ bụ ụbọchị 2-10 ma ọ bụrụ na ngwongwo dị na ngwaahịa. Ọ bụrụ na enweghị ngwaahịa, ọ bụ dị ka iji buru ibu.
1.Advanced production equipment / Advanced mmepụta akara na teknụzụ
2. Nzaghachi n'ime awa iri na abụọ
3.Ezigbo ndị ọkachamara zụrụ azụ na ndị zụrụ azụ
Ngwa akwa na nkwụnye na-ọtụtụ-eji haịdrọlik na ọmụmụ erute ststem nke ígwè, oilfield, m, ụlọ, ụgbọ njem na ndị ọzọ ọrụ.
Usoro QC anyị:
Dị ka anyị nwere ihe karịrị 10 ọkachamara na teknuzu onwe, ha hụ 100% ngwaahịa achọpụta.
(1) .Nyochaa akụrụngwa: njikwa njikwa ihe eji eme ihe, zute ụkpụrụ mba achọrọ;
(2) .Nyocha mbụ: Lelee ngwaahịa mbụ na usoro ọ bụla.
(3) .Ọgwụgwụ nke ngwaahịa nyocha: na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ndị ọrụ na-elele nha ka eserese ma chọpụta eriri na nlele eri;
Onye ọ bụla anyị na ngwaahịa gafere site ule nditịm site anyị ọkachamara oru onye.
Obi dị m ezigbo ụtọ ịme ka anyị mata uru anyị bara.
1.More asọmpi ego karịa ndị ọzọ na-eweta
2.Own afọ 20 nwere ahụmahụ.
3. Nyefe na oge.
4.High mma ngwaahịa na zuru okè mgbe-sales ọrụ.
A: Anyị bụ ndị na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ anyị na Shijiazhuang.
A: N'ozuzu ọ bụ ụbọchị 2-10 ma ọ bụrụ na ngwongwo dị na ngwaahịa. ma ọ bụ ọ bụ 20-40 ụbọchị ma ọ bụrụ na ngwongwo na-adịghị na ngwaahịa, ọ bụ dị ka nke ukwu.
Q: you na-enye ihe atụ? ọ bụ n'efu ma ọ bụ mgbakwunye?
A: Ee, anyị nwere ike ịnye ihe nlele ahụ maka akwụghị ụgwọ, ụgwọ ibu bụ maka akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị nye iwu, anyị nwere ike ịlaghachi ụgwọ ụgwọ.
Na-achọ ezigbo Hydraulic Fittings Hose Manufacturer & supplier? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All Ihe eji eme Ngwunye Hydraulic nke a ga-eme ka ọ bụrụ nke ejiri n'aka. Anyị bụ ụlọ ọrụ China nke dị n'ụdị dị iche iche nke Hydraulic Fittings Hose. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
agụụ agụụ valvụ sooks njikọ kwesịrị ekwesị
Hydraulic sooks Metric pipe fittings nipples
Parker mgbanwe tube braided mmanụ ụgbọala oyiyi akwa
Hydraulic igwe anaghị agba nchara sooks njikọta ikuku f ...
Water anwụrụ nwoke kwesịrị ekwesị nri n'akuku sooks njikọ
Refrigerant sooks ikpe haịdrọlik American eaton ...